मुलुक चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीका भरमा | Nepal Ghatana
प्रकाशित : ३० भाद्र २०७८, बुधबार ०८:३९
जसपाले भौतिक र परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिरहेको छ भने माधवकुमार नेपालको दलले स्वास्थ्य र उद्योगसहित शक्तिशाली मन्त्रालयमा नजर लाइरहेको छ । यसैगरी, अन्य प्रभाव राख्ने मन्त्रालयमा पनि गठबन्धन आबद्ध दलको नजर परिरहेको छ । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन ।
आइतबार जारी गरेको सरकारको आदेश कार्यान्वयन होला ?
(पूर्णपाठ) यस्तो छ कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेकाे ३६ बुँदे आदेश
(सूचीसहित) के गर्न हुन्छ, के-के गर्न पाइँदैन ? यस्ता छन् कोरोना बढेसँगै सरकारको कडाइ